အစာအိမ်ကင်ဆာ (gastric cancer) .... - Hello Sayarwon
အစာအိမ်ကင်ဆာက အရင်ကတော့ လူတော်တော်များများနဲ့ စိမ်းနေနိုင်ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဖြစ်ပွားမှု များလာကြောင့် အစာအိမ်ကင်ဆာကို သတိထားမိတာတွေ များလာပါတယ်။ အစာအိမ်က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။
အစာအိမ်ကင်ဆာဆိုတာ အစာအိမ်ထဲကဆဲလ်တွေ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ကြီးထွားလာတဲ့အနေအထားပါ။ အစာအိမ်ကင်ဆာကို (gastric cancer) လို့လည်း သိကြပါတယ်။ အစာအိမ်ကင်ဆာက အစာအိမ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အစာအိမ်ကိုယ်ထည်မှာဖြစ်တာများပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာက အစာရေမျိုပြွန်နဲ့ အစာအိမ်ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာက များသောအားဖြင့် အစောပိုင်းလက္ခဏာ ပြသလေ့မရှိပါဘူး။ အစာအိမ်ကင်ဆာက အဆင့်တော်တော်လေးရောက်လာတဲ့အခါမှ အခုလို လက္ခဏာလေးတွေ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
နည်းနည်းပဲစားပြီး ဗိုက်ပြည့်တယ်လို့ ခံစားရမယ်
ဗိုက်အောင့်မယ်။ အစားစားပြီးချိန်မှာ ပိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးအောင့်မယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတွေထဲက
H. pylori လို့ ခေါ်တဲ့ အစာအိမ်အနာဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုး ဝင်ရောက်ကူးစက်တာ
Helicobacter pylori လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး ဝင်ရောက်ကူးစက်တာ
အစာအိမ်ကင်ဆာ အစောပိုင်းမှာ လက္ခဏာပြသမှု မရှိသလောက်ဖြစ်တာကြောင့် ရောဂါရှိနေလား သိနိုင်စေဖို့ဆိုရင် အခုလို စစ်ဆေးမှုလေးတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါမယ်။
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေရှိလားဆိုတာကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်မယ်
အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ H. pyloribacteria ရှိနေလားဆိုတာကို သိရှိနိုင်စေဖို့ သွေးစစ်မယ်
အကျိတ်တွေ၊ အစာအိမ်နဲ့ အစာရေမျိုမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုခု ရှိနေလားဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် အစာခြေစနစ် အထက်ပိုင်းကို မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်တာ
အသားစ နမူနာယူ စစ်ဆေးတာ
ပုံရိပ်ဖော်ကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့ CT scans ၊ X-rays တို့နဲ့ စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာက လက္ခဏာတွေပြဖို့ နှစ်အတော်ကြာကြာ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာမဖြစ်ခင် အစာအိမ် အတွင်းနံရံမှာ ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ကင်ဆာ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာက အစာအိမ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးကနေ စတင်ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာ ကွာခြားမှုအလိုက် လက္ခဏာတွေကလည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာ ခံစားရသူတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းက ဒီင်ဆာ အမျိုုးအစားကို ခံစားနေရတာပါ။ ဒီကင်ဆာအမျိုးအစားမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေက အစာအိမ် အတွင်းဘက်ဆုံး နံရံတွေရဲ့ ဆဲလ်တွေကနေ စတင်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။
ဒီကင်ဆာ အမျိုးအစားကတော့ အစာအိမ်နံရံမှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်ခံအာစနစ်ဆဲလ်တွေကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ကင်ဆာအမျိုးအစားပါ။
ဒီကင်ဆာ အမျိုးအစားမှာတော့ ကင်ဆာကျိတ်တွေက အစာခြေစနစ် တလျှောက် များသောအားဖြင့် အစာအိမ်ထဲမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ interstitial cells of Cajal လို့ခေါ်တဲ့ အစာအိမ်နံရံဆဲလ်တွေမှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်တာပါ။
ဒီကင်ဆာ အမျိုးအစားကတော့ အစာအိမ်ထဲက ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ဆဲလ်တွေကနေ ကင်ဆာကျိတ်တွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်တာပါ။
အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အခါ အစာအိမ်ကင်ဆာ အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး ခံယူရတဲ့ ကုသမှုတွေကလည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ကုထုံးတစ်ခုတည်း ခံယူရတာရှိသလို ကုထုံး နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီး ကုသမှု ခံယူရတာလည်း ရှိပါတယ်။
immunotherapy ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အခါ အစာအိမ်ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ဖျက်တဲ့ ကုသနည်းတွေက အစာအိမ်ကင်ဆာကို သက်သာစေဖို့အပြင် အစာအိမ်က ကင်ဆာဆဲလ်တွေက အခြားကိုယ်တွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့
အစာအိမ်ကင်ဆာ မဖြစ်စေဖို့ နေ့စဉ် နေထိုင်မှုပုံစံကို ဂရုစိုက်တာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားသောက်တာ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်တာ၊ ပုံမှန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတေါ ခံယူတာမျိုး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
Can Stomach Cancer Be Prevented? https://www.cancer.org/cancer/stomach-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html Accessed Date 29 December 2020
Stomach (Gastric) Cancer Prevention (PDQ®)–Patient Version https://www.cancer.gov/types/stomach/patient/stomach-prevention-pdq Accessed Date 29 December 2020
What Causes Stomach Cancer? https://www.cancer.org/cancer/stomach-cancer/causes-risks-prevention/what-causes.html Accessed Date 29 December 2020
Lifestyle Changes to Manage Stomach Cancer https://www.winchesterhospital.org/health-library/article?id=32798 Accessed Date 29 December 2020